Ukuphelela Kwebhrendi Ukuqhathanisa Ijubane Lokuqukethwe | Martech Zone
NgeSonto, Agasti 19, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Kunenselelo ezikhubaza izinhlangano njengamanje. Kuyinto ijubane. Iminyango yezokumaketha ehlala ishesha futhi ikhishela okuqukethwe ngejubane iyachuma. Iminyango yezokumaketha ekhubazeke ngenxa yokuphelela komkhiqizo iyahluleka. Isisho sakudala sefudu nonogwaja.
Ufudu luvame ukuwina. Izinkampani ezakha imiyalezo ecacile, ephelele nezithombe ngokungaguquguquki zikwenze kwaba phezulu. Izinkampani ezingenawo umkhiqizo oqinile bezizosala ngemuva… zingathembeki futhi zinganakwa njengoba lo mkhiqizo ophelelisiwe untshontshe intshisekelo nentshisekelo yalabo abazoba nakho.
Imakethe iguqukile, noma kunjalo, futhi manje amakhasimende axhumana futhi acwaninga ngokuthenga kwawo okulandelayo, enikeza isaziso esincane kakhulu (noma isikweletu) kulo mkhiqizo. Bona, esikhundleni salokho, bafuna izeluleko kubangani nomndeni, ukubuyekezwa kubantu abangabazi, futhi bafuna ukuvula inkhulumomphendvulwano nenkampani esikhundleni sokuqondiswa kumeyili yezwi noma i-imeyili. Bafuna izimpendulo, hhayi ama-logo amahle, amawebhusayithi, izikhangiso neziqubulo.
Imijaho imifushane futhi ama-hares manje ayanqoba. Imikhiqizo engaphelele iyasekelwa - futhi iyachuma kulezi zinsuku - uma inkampani yabo inikezela ngamathuba ngenani nokuqonda. I-logo, isiqubulo nomkhiqizo omuhle akwanele kulezi zinsuku ukuheha uquqaba. Esikhundleni salokho, iqembu elihlinzeka ngokuholwa nobuholi libaluleke kakhulu kunomkhiqizo uqobo.
Manje yikuphi? Ufudu lokuphelela komkhiqizo noma unogwaja wejubane lokuqukethwe onqoba umjaho?
Ngicabanga ukuthi unogwaja ukhipha ufudu. Imikhiqizo iyingxenye ebaluleke kakhulu yecebo lakho jikelele, kepha lapho ukuphelela kwalowo mkhiqizo kuvimbela amandla akho okuxhumana nalabo abafuna futhi abalinde ukwenza kanjalo, awuhlangabezani nokulindelwe emakethe yakho. Imakethe ifuna ukuthi uxhumane nabo njalo ukuze unikeze inani.
Imakethe ayifuni ukuphelela, ifuna izimpendulo. Izinhlobo ezinkulu zisengachuma, kepha ngaphandle kokuthi zisebenzise ubugagu bukanogwaja. Ama-hares angashayela ithoni yebhizinisi… kepha badinga ukwenza umkhiqizo wabo ngokuhamba kwesikhathi.
Ezinye izibonelo zeBrand over Speed:
Izinkampani ezithela ngaphezulu komklamo we-infographic izinyanga ukulungisa yonke imininingwane. I-infographics yabiwe ngokususelwa ku- kokubili ukwakheka nedatha. Yonke i-infographic ngeke isabalale. Thola i-infographic laphaya, funda emiphumeleni, bese uqala ukuklama elandelayo. Ukuthola uhhafu we-infographics emakethe ukuyithengisa okubukeka kukuhle kungcono kunokungatholi lutho lapho.
Izinkampani zikhathazeke kakhulu ngokuxoxa indaba ephelele kangangokuba zilishaya indiva iqiniso lokuthi umfundi akayifuni nhlobo indaba. Banenkinga futhi bafuna okuthile okuzokulungisa. Uma uyilungisa, bazothenga. Uma konke onakho kuyizindaba, uzolahlekelwa yibhizinisi kulabo abanezimpendulo.
Izinkampani ezinewebhusayithi eyazi kahle ukuthi ayisebenzi, ziyangabaza ukudonsa intshisekelo ngokushicilela iwebhusayithi entsha engcono… kepha ayiphelele. Kuyamangalisa ukuthi usebenza ekwakhiweni kwengcebo, kepha manje udinga okuthile okusebenzayo. Kwenze kusebenze, thuthuka njengoba uhamba.
Izinkampani azihlali zikhathazeka ngejubane ngoba zinendlela encane yokukala imali abalahlekelwa yiyo. Njengoba sisebenza nezinkampani ukuzicindezela ukuba zisebenze ngokwengeziwe, sivame ukukhungatheka ngenani leziphazamiso abantu abanazo, ikakhulukazi ngokusekelwe ekupheleleni, ngaphambi kokuba baphile. Uma sesiphila bukhoma, inkampani ivame ukubuya ithi… Ngifisa sengathi ngabe sikwenzile kulezi zinyanga ezedlule.
Angikhuthazi ngokunikela ngomkhiqizo wakho. Ngikhuthaza ukuyekethisa phakathi kwejubane nomkhiqizo ukuze ukwazi ukukhulisa futhi usebenzise kokubili ukuthuthukisa imizamo yakho yokumaketha.
Tags: brandUkukhangisa Okuqukethwesocial mediaijubaneisu